Par Taratra sur 22/07/2016
“Magnantso”, entin’i Volavie
Manohy ny fampahafantarana ny rakikirany faharoa eto Madagasikara i Volavie. Manome fotoana ireo mpankafy mozika etsy amin’ny Café de la Gare Soarano izy anio, manomboka amin’ny 7 ora hariva. Hoentiny an-tsehatra amin’izany ireo hira 13 voarakitra ao anatin’ilay vokatra vaovao, miampy ampahany tamin’ireo tanatin’ny rakikira voalohany.
“Jazz & Blues”, eny amin’ny CGM
Andriambavilanitra miisa enina, samy kalaza amin’ny mozika no hampiaraka talenta anio, manomboka amin’ny 7 ora sy sasany, etsy amin’ny CGM Analakely. Hihodidina ny mozika jazz sy blues ry Fanja Andriamanantena, Sandrine Rajaofetra, Joelle Claude, Voahirana Andriambelo, Zara R, ary Elsie. Hisy ny tolotra tsy ampoizina homanin’izy ireo, amin’ny maha seho miavaka azy izay.
Silo etsy amin’ny Piment Café
Silo amin’ny endriny rehetra… Hizara ny talentany etsy amin’ny Piment Café Behoririka indray i Silo, anio alina. Mpanakanto mahafehy zavamaneno maro izy, ary izay talenta marolafy izay mihitsy no hasongadina amin’ity indray mitoraka ity. Hoentin’i Silo hanaraka azy any anatin’ny tontolony ireo mpijery ho avy mandritra izany.
Tovo J’Hay eny amin’ny Trass
Mitohy hatrany ny fiakarana an-tsehatra ho an’i Tovo J’Hay. Etsy amin’ny Trass Tsiadana indray izy no manome fotoana an’ireo mpankafy, anio alina. Hitondrany ireo hiram-pitiavana izay mampiavaka an’i Tovo J’Hay izany. Fotoana hizarany ireo vaovao, izay miaka-daza tato ho ato ihany koa izany.
Nangonin’i Zo ny Aina